नेपाली उत्पादनलाई अमेरिका हुँदै विश्व बजारमा लैजान सहयोग पुग्छ - Ratopati
नेपाली उत्पादनलाई अमेरिका हुँदै विश्व बजारमा लैजान सहयोग पुग्छ
- | बुद्धि प्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष, एलएलसी, अमेरिका
नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न र व्यापार नेटवर्क स्थापित गर्नका लागि अमेरीकाको न्यूरोर्कमा आगामी आगामी सेप्टेम्बर ३० देखि अक्टुबर २ सम्म तीनदिने ‘नेपाल एक्जीबिसन एण्ड ईन्टरनेशनल ट्रेड शो’ हुँदै छ । अमेरीकाको मेरील्याण्ड राज्यमा दर्ता भएको नेपालीहरुको संस्था वल्र्ड बिजनेशस म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्ट्याण्ट एलएलसीले मेलाको आयोजना गरेको हो । अमेरिका लगायतका विश्वका विभिन्न देशका खरिदकर्ताहरुलाई नेपाल ल्याएर ‘बिजनेश टु बिजनेश’ नेटवर्क सञ्चालन गरीने यो प्रदर्शनीको परीकल्पनाकार हुन एलएलसीका अध्यक्ष बुद्धि प्रसाद रेग्मी । उक्त मेलाको समग्र विषयमा रेग्मी संग रातोपाटीकर्मी भरत पाण्डेयले गरेको कुराकानी :
नेपाल प्रदर्शनी तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला किन ? यसको मुख्य उद्देश्य ?
नेपाली उत्पादनलाई अमेरिका हुँदै विश्वबजारमा पु-याउनका लागि हामीले यो मेला आयोजन ागर्न लागेका हौँ । अझ यसको मूख्य उदेश्य नेपाललाई नै विश्व बजारमा कनेक्सन गराउनु हो । लागि हो ।
प्रदर्शनीमा कस्ता व्यवसायीले भाग लिन पाउँछन ?
यो मेलामा सामान्यतया नेपालको साना, घरेलु र मझौला उद्योगीले भाग लिन सक्नेछन् । विशेषगरी कृषि उत्पानहरु, बाँस, निगालो, कागजबाट बनेका सामान, प्लाष्टिक तथा माटोबाट बनेका सामान हस्तकला, चित्रकला, पस्मिना, गार्मेण्ट, टुरीज्म एण्ड ट्राभल एजेन्सीहरु, टे«किङ्ग, हाईकिङ्ग तथा जोखिमपूर्ण काम गर्ने पर्यटन उद्योगीहरुका आफ्ना उत्पादन, बस्तु तथा सेवाहरु प्रदर्शनीमा राख्न सक्नुहुन्छ । विशेष गरी कृषि तथा नेपाली सामान उत्पादन गर्ने संस्थाहरुले भाग लिन सक्नेछन् ।
स्टल दर्ता प्रकृया के छ, कहिलेसम्म दर्ता गरिसक्नु पर्छ ?
प्रदर्शनीको लागि अप्रिलको पहिलो साताबाट नेपालमा सानो अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर स्टल दर्ताका प्रकृया खुलाएका छौँ । अप्रिलको ३ तारिकबाट यो प्रकृया शुरु भएको छ । वेभसाईटमा पोख्तहरुले हाम्रो वेभसाईट http://www.wbmconsultants.com/ खोलेर आफै कम्पनीको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ । एउटा कम्पनीबाट के के सामान प्रदर्शनीमा ल्याउने हो, प्रदर्शनीका लागि कति जनाले भाग लिने हो, कुन भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउनुपर्छ । उहाँको विवरण आईसकेपछि हाम्रो उद्देस्य अन्तर्गत मिल्यो भने अगाडीको प्रकृया शुरु हुन्छ । यदी हाम्रो उद्देस्यसंग म्याच नखाने रहेछ भने उहाँलाई अर्को पटकका लागि यसरी काम गर्नुहोला भनेर हामी सल्लाह सुझाव दिन्छौँ । दर्ता प्रकृया आगामी मेको आखिरीसम्म दर्ता प्रकृया जारी रहन्छ ।
प्रदर्शनीमा भाग लिनेहरुलेस्टल दर्ताका लागि शुल्क कति लाग्छ ?
स्टलको शुल्क भनेरनै त छैन । तर हामीले उहाँहरुले यहाँ आएर सबै व्यवस्थापन गर्न अलि असम्भव होला भनेर सहयोगका लागि केही शुल्कको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो दुई किसीमको प्याकेज हामीले उहाँहरुलाई दिएका छौँ । बुथमात्र लिने र खाने बस्ने व्यवस्थाका लागि फरक फरक शुल्क छ ।
जस्तो पहिलो चाहीँ विश्वभरी जुन ठाउँबाट आउने दुईजनालाई आउने जाने दुईतर्फि टिकट, बुथ भित्र चाहिने सामान र न्यूयोर्क पाँच दिन बस्न आउने जाने होटलको व्यवस्थाका लागि सात हजार चार सय ९९ डलर शुल्क छ । दश बाइ दश को बुथ हो । यसमा आउनेहरु र बुथ तथा व्यक्तिको पनि सम्पूर्ण विमाको व्यवस्था पनि हुन्छ ।
तर आफै सबै कुरा म्यानेज गर्छु भन्नुभयो भने बुथको मात्र ४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ शुल्क छ । यसमा बुथको विमा छ । तर ट्राभलको विमा चाहीँ आफै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पेमेण्टको प्रकृया चाहिँ आधा प्रतिशत पहिलै दर्ताको क्रममा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी आधा भिसा लिन जाने बेलासम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो प्रदर्शनीले नेपाली व्यवसाय र व्यवसायीलाई के फाईदा हुन्छ ?
यदी हाम्रो प्रदर्शनी राम्रो संग सफल भयो र सबै उद्योगी व्यवसायीले साथ दिनुभयो भने यो प्रदर्शनी नेपालीहरुले विश्व बजारमा आयोजना गरेको ठूलो प्रदर्शनी हुने छ । अहिलेसम्म नेपालीहरुले नै निजी क्षेत्रबाट अन्तराष्ट्रिय बजारमा यति ठूलो प्रदर्शनी गरेको जानकारीमा आएको छैन । अमेरीकामा हामीले यो काम सफल गर्न सक्यौँ भने नेपालीहरुले विश्वबजारमा आफ्नो प्रदर्शनी गर्ने र बजार निर्माण गर्ने खुट्कीलो हुन्छ ।
अस्ति फेब्रुअरी २५ मा अमेरीकी राष्ट्रपतिले एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसमा नेपाली ६६ वस्तुहरु नेपालबाट अमेरीका ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन । यो आजको लागि मात्र होईन १० वर्षको लागि हो । हामीले यस्तो महत्वपूण बेलामा यो अवसर सिर्जना गरेका छौँ । यो प्रदर्शनीले नेपाली उत्पादनलाई अमेरीका हुँदै विश्व बजारमा लैजान सहयोग पुग्दछ ।
प्रदर्शनीका लागि मात्रै हो कि कारोबार पनि ?
प्रदर्शनीमा कारोबार पनि हुने छ । न्यूयोर्कको ७५ हजार स्क्यायर फुटको ‘न्यूयोर्कको पियर९२ म्यानहयाटन’ हामीले लिजमा लिएका छौँ । पाँचदिनको लागि । एकदिन स्टल बनाउन समय दिन्छौँ ।
यो प्रदर्शनी अवलोकन गर्नेहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवसथा छ । हामी टिकट लिँदैनौँ । त्यसैले नेपाली उद्योगीहरु, जसले प्रदर्शनीमा भाग लिनुहुन्छ उहाँहरुले ल्याएको सामान जसलाई पनि बेच्न सक्नुहुन्छ । यसबाट एउटा तत्कालको व्यापार हुन्छ अर्को दिर्घकालका लागि बायरहरु पत्ता लगाएर भविस्यको कारोबारको माध्यम बनाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रदर्शनीको खर्चको अनुमान र कारोबारको लक्ष्य राख्नुभएको छ होला । लक्ष्य र अनुमान के कति छ ?
नेपाल तथा विश्वभर रहेका ३ सय ५० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाउने हाम्रो अपेक्षा छ । जसमा ७० प्रतिशत नेपालभित्रका र ३० प्रतिशत नेपाल बाहिरका उद्योगी व्यवसायीहरु सहभागि गराउने लक्ष्य हो । त्यसमा सम्पूर्ण प्रदर्शनीको खर्च २ मिलियन डलर (२० करोड) जति जम्मा खर्च आउँछ भन्ने अनुमान छ । हाम्रो अहिलेको टार्गेट १० देखि १५ हजार दर्शक ल्याउने हो । यसमा हामीले यति नै कारोबार होला भन्ने त हैन तर एक देखि साढे १ मिलियन डलरको कारोबार होला भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो चाहीँ हाम्रो हाम्रो लक्ष्य अनुसारको सहभागीता गराउन सकियो भने । मेलामा अमेरिका लगायतका विश्वका विभिन्न देशका खरिदकर्ताहरुलाई नेपाल ल्याएर ‘बिजनेश टु बिजनेश’ नेटवर्क सञ्चालन गर्ने पनि उद्धेस्य रहेकोले यसपछि त उहाँहरुले आफूहरुले ल्याएको सामानबेच्नेदेखि बेच्नका लागि बाटो खुलिहाल्छ ।
प्रदर्शनीको लागि कुनै संघ संस्थाहरुको सहयोग र समन्वय हुने छ कि ?
आर्थिक रुपमा हामीले कसैसंग पनि सहयोग लिएका छैनौँ । सम्पूर्ण व्ययभार हाम्रो कम्पनीले लिएको छ । व्यापारीहरुले पनि आफ्नो सम्पूर्ण खर्च तिरेरै आउनुहुन्छ ।
हाम्रो नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोगका लागि कुनै अपेक्षा छैन । तर उद्योगमन्त्रीज्यूले हामी लजिष्टिक सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ । अनि उद्योगवाणिज्य महासंघ, घरेलु उद्योग महासंघ, नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि प्रवद्र्धकको रुपमा सहयोग गरीरहनुभएको छ । ट्राभल एण्ड टुर्स सोसिएसन (टान) ले पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
अमेरीकास्थित नेपाली दुतावासले पनि हाम्रो साथ र सहयोग छ भन्नुभएको छ । न्यूयोर्कमा रहेको ग्रेटर न्यूयोर्क चेम्बर अफ कमर्स संग पनि हाम्रो संस्था सदस्य छ । यो संस्था संग ३० हजार उद्योगी व्यापारी सदस्यहरु छन् । हाम्रा उद्योगीहरुलाई त्यो नेटवर्कभित्र राख्ने प्रयास गरीरहेका छौँ । त्यसैले महत्वपूर्ण कुरा यहाँ प्रदर्शनीका लागि आउनेहरुको अन्तराष्ट्रिय नेटवर्क बन्ने छ ।
यो मेला आयोजनाको तयारी गरको तपाइँहरुको संस्था कस्तो संस्था हो ?
वल्र्ड बिजनेशस म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्ट्याण्ट एलएलसी अमेरिकाको मेरील्याण्ड राज्यमा दर्ता भएको संस्था हो । ८ जना सञ्चालक छौँ । यो प्रोजेक्टको पनि म अध्यक्ष हो । यो परीयोजना डिजाईन गरेँ । यो मात्र नभएर यस्ता खालका अन्य प्रदर्शनीहरुमा अमेरीका भाग लिने र सामाजिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसको कर्पोरेट अपिस न्यूयोकमा छ ।
अमेरीकामा विभीन्न पेशा व्यवसायमा स्थापित गर्ने हरुले कन्सल्टिङ्ग ईभेण्ट म्यानेजमेण्टका लागि गरेको संस्था ।
अन्तमा आयोजकको तर्फबाट केही भन्नु छ कि ?
म भन्न चाहन्छु की नेपालका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी कृषक, जस्ले ईलाममा चिया, गुल्मीमा कफि, डोल्पामा यार्सा, जुम्लामा स्याउ, पाल्पामा ढाका, करुवा उत्पादन गर्ने र अन्य उत्पादन चलैचि, सुठो, लगायतका उत्पादन गर्नेहरुलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ । व्यापारीलाई मात्र नभएर आफ्नो हातबाट सामान उत्पादन गर्ने हस्तकर्मी र आफ्नै मेहनेतले उब्जनी गर्ने कृषकहरुलाई स्थान दिने छौँ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्णं उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी निकाय, कृषक सबैले जसले जहाँबाट जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाटै सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।